आँखामा औषधि कसरी हाल्ने ? - ज्ञानविज्ञान
धूलो, धूँवा, चहकिलो प्रकास, हानिकारक वायु आदिबाट आँखालाई जोगाउनुपर्छ । यसका लागि चस्मा लगाउन सकिन्छ ।
आँखा आसपासको भागलाई सधै सफा राख्नुपर्छ । खासगरी सुत्नुअघि आँखा सफा पानीले धुनुपर्छ ।
मधुमेह, उच्च रक्तचापले पनि आँखाको दृष्टि कमजोर बनाउँछ, त्यसैले मधुमेह, रक्तचाप नियन्त्रण राख्नुपर्छ ।
आँखामा जथाभावी औषधी नराखौं ।
कमसल खालको चस्मा लगाउनु हुन्न ।
आँखामा कुनै बस्तु पस्यो भने रगड्नु हुँदैन ।
रातभर पानीमा १० वटा जति बदाम भिजाएर राख्ने । बिहान त्यसको बोक्रा उतारेर पेस्ट बनाउने । यस पेस्टलाई तातो दुधसँग सेवन गर्नुपर्छ । यसलाई केहि महिनासम्म निरन्तरता दिनुपर्छ ।
पिसेको सुकुमेललाई दुधमा राखेर उमाल्ने । यसलाई राती पिउने गर्नुपर्छ, जसले आँखालाई स्वस्थ्य बनाउँछ ।
धनियाको तीन भागका साथ एक भाग चिनीको मिश्रण तयार गर्ने । यसलाई पिसेर पानीमा उमाल्ने, एक घण्टा त्यतिकै राख्ने । एक सफा कपडाले छानेर उक्त रस पिउनुपर्छ ।
परिवारमा कसैलाई दृष्टि दोष भएमा उसबाट जन्मने बालबालिकामा पनि दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया हुने सम्भावना धेरै हुने गर्छ । त्यस्तै, धेरै किताब हेर्ने बालबालिकामा पनि मायोपिया हुने सम्भावना उच्च हुने गर्दछ । त्यस्तै, जन्मजातै आँखा टेढो हुने बालबालिकामा पनि मायोपिया हुने सम्भावना धेरै हुने गर्दछ । मायोपिया भएमा यस्ता लक्षण देखा पर्छ ।
दृष्टि धमिलो भएमा आँखामा चश्मा लगाएर यसको उपचार गर्नु पर्दछ । चश्मा लगाएको खण्डमा बच्चाले राम्ररी आँखा देख्न सक्दछ । यो हामीले सुरुका केही बर्षहरुमा गर्नुपर्छ । जस्तै, बच्चा आठ वर्षको भएदेखि नै आँखाको दृष्टि दोषको उपचार गर्न सकेको खण्डमा आँखा अल्छी हुँदैन । अर्थात लेजी आईु वा एम्लायोपियाु हुँदैन । किनकी दृष्टि दोष हुनुमा अल्छी आँखा ९ लेजी आई० तथा एम्लायोपिया ९टेढो आँखा० पनि प्रमुख कारण हो ।
Don't Miss it कसरी हटाउने धेरै सोच्ने बानी ? जान्नुहाेस्
Up Next किन झमझमाउँछ हातखुट्टा ? यस्तो भए के गर्ने ?